सामाजिक सुरक्षामा विभेद : सरकारी कर्मचारीले ४० हजार पेन्सन पाउँदा निजीलाई १२ हजार मात्रै ! access_timeफागुन २७, २०७७
काठमाडौं । ‘पञ्चायत सुरु हुनुअघि नेपालमा भूमिसुधार ऐन आयो । त्यो ऐन आउँदा देशका ५० हजार नागरिकलाई धेरै पीडा भयो । त्यो समूहमा मेरो परिवार पनि थियो । त्यतिबेला हामीसँग सयौँ होइन, हजारौं बिगाहा जमिन थियो । त्यो गुमाउनुपर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भ...
मेलम्ची आएपछि विकल्प खोज्दै ट्याङ्कर व्यवसायी र मजदुर : २ हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने access_timeफागुन २५, २०७७
काठमाडौं । मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौंमा आइपुगेपछि यतिबेला काठमाडौं उपत्यकावासी खुसी छन् । दुई दशक लामो प्रतीक्षापछि पानी काठमाडौँ आइपुग्दा वर्षौंदेखि अभावको अवस्था झेल्दै आएका उपत्यकावासीले हर्षको अनुभुति गरेका हुन् । निर्माण सम्पन्न हुन अझै बाँकी रहे मेल...
पार्टी विभाजनले अस्तव्यस्त बन्दै नेकपाको ट्रेड युनियन access_timeफागुन २, २०७७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विभाजनसँगै पार्टी निकटका ट्रेड युनियन महासंघ अस्तव्यस्त बनेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एन्टुफ) दुवैमा यस्तो समस्या देखिएको हो । पार्टी एकीकरण भए पनि एक हुन ...
२० वर्षपछि भन्सार एजेन्टको विज्ञापन खुल्दै, यही वर्षभित्र लाइसेन्स दिनेगरी तयारी access_timeमाघ २७, २०७७
काठमाडौं । भन्सार एजेन्टको नयाँ लाइसेन्स यही आर्थिक वर्षभित्र जारी हुने भएको छ । २० वर्षदेखि हुन नसकेको नयाँ भन्सार एजेन्ट थप्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागले अघिल्लो वर्ष नै यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पन...
पोखरा र लुम्बिनीको ओझेलमा सौराहाको पर्यटन access_timeमाघ २४, २०७७
काठमाडौं । बिहान उठ्नेबित्तिकै राष्ट्रिय निकुञ्जसँग लुकामारी गरेर कानसम्म ठोकिन आउने हावा, हावासँगै लोकल गाईभैंसीको दुधबाट बनेको चिया÷कफी, आफ्नै खेतबारीमा फल्ने चामल, सागसब्जी र मासु, थारुहरुको सांस्कृतिक मेला, ओशो ध्यान केन्द्र । यी सबैको लागि सबैभन्दा उपयुक्...
दैनिक साढे ६ करोड नोक्सानमा नेपाल आयल निगम access_timeमाघ २३, २०७७
नेपाल आयल निगम (एनओसी) दैनिक साढे ६ करोड नोक्सानको अवस्थामा पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रचलित बजारमूल्य लागत मूल्यभन्दा कम भएपछि निगम नोक्सानको अवस्थामा पुगेको हो । निगमले गरेको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार फेब्रुअरीको सुरुदेखि मध्यसम्मको १५ दिनमा पेट्रोलियम पदा...
बैङ्कहरुको नाफा : ५१ प्रतिशत वृद्धिदेखि ६२ प्रतिशत गिरावटसम्म, कसको कति ? access_timeमाघ १५, २०७७
वाणिज्य बैङ्कहरुको नाफा वृद्धिमा अस्थिरता देखिएको छ । बैङ्कहरुले पुस मसान्तमा प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैङ्कहरुको वित्तीय प्रगति अरु प्रतिस्पर्धी बैङ्क र अघिल्लो वर्षको आफ्नै प्रगति भन्दा भिन्न देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समयसम्म आइपुग्दा कुनै बैङ्क उत्साह...
एन्टिडम्पिङसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण कसरी हुन्छ ? access_timeमाघ १२, २०७७
काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने वस्तुका कारण संकटमा रहेका स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउने नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आ...
सेयर बजारको सम्पत्ति जीडीपीकोे नजिक, लगानीमा जोखिम कसरी घटाउने ? access_timeमाघ १०, २०७७
काठमाडौं । सेयर बजार यतिबेला दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने क्रममा छ । बिहीबारको अन्तिम कारोबारका आधारमा सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) २ हजार ३ सय ७४ दशमलव ६४ विन्दुमा पुगिसकेको छ । परिसूचक बढ्दा बजार पुँजीकरण समेत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बिहीबारको अन्तिम कारोबारका आधा...
चीनलाई ‘अप्रिय’ लाग्ने सरकारका दुई कदम : सम्बन्ध चिसिएकै हो त ? access_timeमाघ ९, २०७७
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो साता मात्रै चीनलाई ‘अप्रिय’ लाग्ने दुईवटा कदम उठाएको छ । संसद विघटन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग चीनको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा चलिरहँदा सरकारले यस्तो कदम उठाए...
कहाँ कहाँ बन्दैछन् बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी ? access_timeमाघ ७, २०७७
काठमाडौं । अन्तरदेशीय व्यापारमा लजिष्टिक सपोर्टका लागि एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना अघि बढाइएको छ । उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रबाट हुने अन्तरदेशीय तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारका लागि सीमानाकाहरुमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) को निर्माण त...
अघिल्लो वर्षै सक्नुपर्ने साधारणसभाको लागि अहिले संघर्ष गर्दै बीमा कम्पनी access_timeमाघ ५, २०७७
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश कम्पनीले यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साधारणसभा गरिसकेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको नियम अनुसार पुस मसान्तभित्र यस्ता कम्पनीले साधारणसभा गरी कम्पनी अद्यावधिक गराउनुपर्छ । समयमा कम्पनी अद्यावधिक नगराउने कम्पन...
पुस मसान्तमा कस्तो आउला बैङ्कहरुको रिपोर्ट ? access_timeमाघ ५, २०७७
काठमाडौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने चटारो सुरु भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्रै नभएर बीमा कम्पनी तथा बजारमा सूचीकृत अन्य कम्पनीहरु समेत यस्तो तयारीमा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारमा सूचीकृत प्रत्येक कम्पनीले प्रत्येक त्...
बैङ्कले दिने ब्याजदर फेरि घट्यो, अब कुन बैङ्कमा कति पाइन्छ ? access_timeमाघ १, २०७७
काठमाडौं । वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था सुधार हुँदै गएको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरुले भने निक्षेपमा दिने ब्याजदर झनै घटाएका छन् । यसअघि नै ज्यादै कम भएको मानिएको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर माघ महिनादेखि लागु हुनेगरी झनै घटाइएको हो । राष्ट्र बैङ्कले प्रत्येक महि...
४१ महिनापछि खुल्न थाल्यो कतारमाथिको नाकाबन्दी, मध्यपूर्वको ‘शान्ति’ले नेपाललाई कति लाभ ? access_timeपुस २९, २०७७
काठमाडौं । कतारविरुद्ध अन्य खाडी मुलुकले विगत ४१ महिनादेखि लगाउँदै आएको नाकाबन्दी खुला भएको छ । अघिल्लो साता गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) को बैठकमा भएको सहमति भएसँगै अनुसार साउदी र कतारबीचको हवाई उडान सोमबारबाट सुरु भएको हो । नाकाबन्दीपछिकै पह...
सुधारिँदै वित्तीय क्षेत्र : ऋण लगानी बढ्यो, एकै महिनामा ४ अर्ब नाफा access_timeपुस २६, २०७७
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्न थालेपछि त्यसको सकारात्मक असर वित्तीय क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । मंसिर महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप र ऋण तथा नाफामा आएको परिवर्तनले यस्तो अवस्था देखाएको हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि ऋण लगानी ठप्प हुँदा बैङ्...
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि किन ‘शुन्य’ अवस्थामा पुग्छन् विधेयक ? access_timeपुस २२, २०७७
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा शक्तिशाली नियामक निकायको आवश्यकता महशुस गर्दै बीमा समितिले २०७१ सालमै नयाँ बीमा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । बीमा बजारमा बढ्दै गएको पहुँच र आकर्षणसँगै बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना सहित यस्तो विधेयक बनाएको थियो । त्यतिबेला फ...
ई–सपिङमा नियमनका लागि छुट्टै ऐन ल्याइँदै, कसुर गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा access_timeपुस २०, २०७७
काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुँदै आएको वस्तु तथा सेवाको व्यापारलाई नियमन गर्न नयाँ कानुन ल्याउने तयारी थालिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट हुने त्यस्तो कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नयाँ ऐनको विधेयकको तयारी अघ...
फिल्डमा जान डराउँदै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या बढ्दै access_timeपुस १८, २०७७
कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) को महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको चैतदेखि सबै क्षेत्रहरु प्रभावित भए । कतिपय क्षेत्रहरु पूर्णरुपमा प्रभावित भए भने कतिपय क्षेत्रहरुमा आंशिक प्रभाव पर्यो । योबीचमा यातायात, उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायदेखि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थास...
ओलीको स्थायित्व : ७० दिनमै मन्त्री आउट, एउटै मन्त्रालयमा ९ जनासम्म मन्त्री ! access_timeपुस १५, २०७७
काठमाडौं । मंसिर २९ गते शहरी विकासमन्त्री (तात्कालिन) कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नै मन्त्रालयको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना २ महिने उपलब्धि सार्वजनिक गरे । कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले सामान्यतया आफ्नो प्रगतिको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न २ महिनामा पत्रका...
हालसम्मकै ठूलो आईपीओले पायो स्वीकृति, सबैले सेयर पाउने ! access_timeपुस १३, २०७७
काठमाडौं । नेपालमा जारी भएकामध्ये हालसम्मकै ठूलो आईपीओलाई धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) ले प्रस्ताव गरेको ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न बोडले शुक्रबार अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । इन्फ...